Shan arrimood ka ogow doorashada Deegaanka Soomaalida | Xaysimo
Home War Shan arrimood ka ogow doorashada Deegaanka Soomaalida
Doorashada sanadkan lagu wado iney ka dhacdo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa iney wax badan ka duwanaato doorashooyinkii deegaankaasi horay uga dhacay.
Deegaanka Soomaalida oo ka mid ah 10-ka dowlad deegaan oo xubinka ka ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya waxaa ka socdaa diyaargarow xooggan oo loogu jiro sidi ay doorasho guud deegaankaasi uga dhici lahayd.
Waloow ay geeddi socodkii diiwaangelinta codbixiyeyaasha ay walaac ka muujiyeen xisbiyada mucaaradka iyaga oo cabashadoodana guddiga doorashooyinka u gudbiyey.
Guddiguna uu u saaray guddi soo baara cabashooyin salka ku haya geeddi socodka diiwaangelinta codbixiyeyaasha, inta guddigaasi ay natiijada baaritaankooda soo bandhigayaanna la hakiyey diiwaangelinta dhowr iyo toban deegaan doorasho oo ay cabasha ka soo gudbiyeen xisbiyada deegaankaasi oo mucaarad iyo muxaafidba isugu jira.
Doorashada lagu wado dabayaaqada 21- June ee sanadkan iney dalka Itoobiya ka dhacdo waxaa ku loollamaya 47 xisbi, oo isugu jira kuwa u tartama heer qaran iyo kuwa heer deegaan.
Doorashada Itoobiya ka dhaceyso sanadkan 2021-ka ayaa ka dhici doonto dhammaan deegaannada uu dalkaasi ka kooban yahay iyo labada maamul magaalo ee Addis Ababa iyo Diridhaba, balse doorashada ayaanan ka dhaceyn deegaanka Tigraay uu ka socda dagaalka u dhaxeeya ciidamada dowladda dhexe iyo kuwa daacadda u ah Jabhadda TPLF.